Nyore uye dzakaoma linux kugoverwa kana distros | Linux Vakapindwa muropa
Musikana mudiki distros uye murume distros
Unoziva, Linux haina kufanana neWindows, pakati pezvimwe zvinhu nekuti Linux ine zvakawanda zvakasiyana siyana. Asi chimwe chinhu chakanyanya Linux (yatove linuxeros) inosanganisira, ndeyekuti iwe unopinda mutambo we egos:
ndinoshandisa Ubuntu, Windows XP ndezve mapenzi,
Naaa, izvo ndezve ladybugs, ini ndinoshandisa Debian.
Ini ndiri mukuru kupfuura imi mese, ndinoshandisa Slackware, Nditumire pakuve akadaro geek.
Maitiro aunozviona, ndiwo mashandiro ainoita Kune vamwe, pfungwa yekushandisa sisitimu yekushandisa haisi yekungoita mabasa nayo, asi "kudzidza."
Nyore Distros uye Dambudziko Distros.
Pakutanga hapana chandakanzwisisa chero chinhu, nei munhu angave achida kushandisa yakaoma kunzwisisa vhezheni yeLinux nemaune? Icho chakachena mbichana vanhu vari? Kana kuti zvimwe ndiyo iyo nzira yekutenda kupfuura mamwe ese?
Pane zvese zviri pamusoro pane zvishoma:
Iyo ego yemalinuxers inowedzera iyo yakaoma zvakanyanya yavo distro
Zvinhu zvinofanirwa kuitwa nekukurumidza zvinononoka sekuisa iyo system
Vazhinji havadi kuti vatendeke "knob" yega yega pane system kuti vave neyakavimbika system.
... asi hachisi chokwadi chechokwadi kuti iyo "macho distros" ine mukana pamusoro pevamwe:
Nyore Distros = Kumisikidza kumisikidza uye hapana chakaomarara = Zvidiki zvinogadziriswa.
Dambudziko Distros= Inononoka kuisa uye yakaoma kusvika pakutaura zvakakwana = Inogadziriswa kwazvo.
Kana iwe uri kungoziva kuziva iyo nyika Linux, kunyangwe vakakuudza izvozvo Ubuntu naDebian vanotaridzika zvakafanana, pasina chikonzero iwe unoedza DebianNdokumbirawo, kwete, kunyanya kana iwe uchida kuchengeta yako yakachengeteka XP.
Pese pazvinogoneka, edza iyo distro (chero) pane a muchina, kuitira kuti pasazove nezishamiso zvisingafadzi gare gare.
Kana yako system ikashanda zvakanaka,uchinjei? Kunyanya, funga nezvazvo uye kana mhinduro yako kumubvunzo iwoyo ichienderana uye inopfuura yako Linux ego, shanduko ichave yakakodzera.
Heino runyorwa rwe "nyore distros":
Ubuntu (uye zvese zvayakatora)
Linux mint (yakatorwa kuUbuntu isina "untu" inonyanya kukurudzirwa kune anotanga)
Fedora (Yemahara yakatorwa ye Red Hat, yekutengesa distro)
Chero ani anazvo software yemahara chete (hongu, anovada sei Stallman)
Debian (kunyanya kuisirwa kwekutanga, ndiye "amai ve ubuntu")
Slackware uye chero zvigadzirwa zvayo
Chero diki diki inozivikanwa distro, kana uine nharaunda diki, enda kune ino chikamu
Kana ndikarasikirwa nemumwe kana ivo vasingabvumirani neni pane zvinyorwa zvandakaita (nekuti pane zvakawanda), ndiudze.
Uye iwe unoshandisa distro ye musikana mudiki kana of macho? Iyo inyaya ye egos kana kudzidza?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Musikana mudiki distros uye murume distros
CentOS !!! ndeyevarume !!!
Ndinoshandisa Win Ue… .ndiri ani?
Ehe, ndiri anofara pirate murume kana musikana?
N @ ty akadaro
@Nitsuga uri mukati, uye zvakakwana;)
Ini ndiri musikana mudiki uye ndashandisa Ubuntu, Kubuntu, Mint uye ikozvino SUSE ...
Dai ndaishandisa Debian zvaizove ... er ...
Pindura kuna N @ ty
Ini ndinoshandisa ubuntu uye xp, ndeyekuti ubuntu inotonhorera asi rimwe zuva munguva yangu yemahara ndaida kuona rmbv vhidhiyo uye zvakanditorera maawa maviri kuti ndione, ndichikwanisa kuona vhidhiyo ichidya yangu shoma nguva.
Iyo mambure kana ubuntu inotonhorera asi kune avo vakazvipira kana vane nguva.
Saka ndichiri kushandisa ubuntu chete kufamba.
Nitsuga, hongu ndakaiisa. Ndakaitora pasi ndega, ndakaiisa, asi ndichinyora kuitira kuti ibhutswe, vakandibatsira.
Juan C… .. yakafanana penguin… yakatofanana furemu… ¿?
Ndechipi chikonzero ichi positi ... especiallyU kunyanya nekuti ini ndinomanikidza distros tester ...
Ini munguva pfupi yapfuura ndakaita shanduko kunaDebian (ine mhedzisiro ine njodzi) mandisingakwanise kana kurodha waya yeiyo module yekubatanidza ... (Vamwe vanoti zviri nyore, ndaona kuti ndiri benzi ripi).
Zviripachena ndakachinjira kuUbuntu, ehe, zvinhu sezvazviri:
a) Zviri nyore kwazvo, chaizvo "windowserized", hongu, asi ndosaka ndisingatyori dehenya rangu kuti ndiite chero chinhu
b) Ine tropo zana mabhirioni maforamu ekusahadzika (Ndeupi Debian asiri, ayo mageek haashandise izvo ...)
c) Inoenderana nehuwandu hwesimbi "yekupinda" (Chinhu icho Debian hachiite, kuti avo vanokanganisa vanoisa iwo ma module ivo pachavo, ndiani aigona = S)
d) Kuisirwa kwekutanga kuri nyore uye nekukurumidza (ingori maminetsi makumi matatu) uye izvo zvinoita kuti usaora mwoyo ne "Ndinoita sei fomati dhiraidhi yangu?"
Mhedzisiro: Ehe, ini ndinoda kudzidza, asi kwete pamubhadharo wekuve necomputer isingabatsiri kwemazuva nekuti ini handigone kuita chimwe chinhu chakakosha kune debianero sekuisa modprobe mumamiriro Saka ndinonamatira ubuntu.
PS: «Gava rikati kumazambiringa: Bah, achave akasvibira» chikonzeroi ingano mwari wangu xD
Nitsuga, vapoteri ndomumwe wevazhinji vashandisi veLinux vanotaura kubva kubasa, uko nekuda kwezvikonzero kana tsika, sezvo Bachi aiziva kutsanangura mune imwe posvo, vanoshandisa windows.
Nitsuga ... sei ndichifanira kugadzirisa firefox? ... 3.2 yatobuda kare?
Wakatorera kupi iwo mufananidzo kubva (huya, ndinoziva kuti mutambo mumwechete mu2)
Uye ini ndinoshandisa ubuntu (izvo zvinoenda, ndine linux mavhiki matatu apfuura) uye ndosaka ndisiri mumwe musikana mudiki, kana kana? Kuti pamwe danho randakaita kuti ndibve Windows a Linux (zvisinei distrohaina kuverenga?
Pindura kuna Nitsuga
Ongorora: Ndinoziva kuti kumusoro uko kunoti Windows XP, ini handisi pamba ...
@esty uri kudzima
Ini pachezvangu ndinoshandisa Arch, uye kwete nekuti ini ndinofunga ndiri mukuru maziso ekuishandisa, asi nekuti ini ndinofunga matambudziko anounzwa neiyo kuiswa ndeyekudyara.
Iyo sisitimu, yakambosungirwa uye yakagadzirirwa, inomira nekuda kwekureruka kwayo, uye panguva yese maitiro ekuisiya ichimhanya ndakadzidza zvinhu zvakawanda, izvo zvinowedzera zvakanyanya iyo yakawedzera kukosha iyo iyo distro yainayo kwandiri.
Ini ndinofunga kuti kuve maziso ekushandisa yakaoma distro zvakajairika, kunyange ini ndichifunga kuti hazvina kunaka. Pachine zvakawanda zvakasara kuti vakadzi vafire varume vanoziva kushandisa terminal, kana kuunganidza zvese zvavanoshandisa. Ini ndinotenda kuti sarudzo inofanirwa kuve nyaya yekutsvaga chimwe chinhu chinosangana nezvatinoda, zvatinotarisira uye zvatinotarisira, kunyangwe tiri kutsvaga kudzidza zvakawanda kana kuva nehurongwa hwakanyanya kuchinjika kune chimwe chinodiwa.
esty, iwe uri PIRATE, izvo zvakasiyana nezvakataurwa mune iyi tambo, vanyengeri vanoshandisa microsoft havaverenge xD
Sergio, hongu, asi iye anoziva kuti kune mamwe ma distros ayo, kana iwe unonamatira navo mukaka kwemazuva maviri kusvika iwe wavawana kuti vashande, kana iwe ukaora mwoyo ukavatuma kunotora mhepo, havazi vese vane ruzivo rwemberi kana ingori nguva yekuve nePC «iri kuvakwa»
@ N @ ty: Ndatenda. Zvese izvi zvinoitika kwauri nekuti kunyangwe iwe ukashandisa Gentoo unenge uchiri mukadzi: P
@esty Ini ndinofunga mwana, sezvo ndichifunga kuti hauna kana kuisa iyo OS, yakauya nePC.
Saka ikozvino unoziva: iwe uria akaora mwoyo pirate mwana :D
Kune avo vachangotanga, ini ndinokurudzira Ubuntu, zviri nyore uye kana iwe uine chero dambudziko une nharaunda huru kunze uko kuti uigadzirise ...
Ndakawana mufananidzo! http://www.yamsblog.com/wp-content/uploads/2007/10/linux_tans_labeled.png
Ini ndinoshandisa Ubuntu asi ini ndiri wakawanda kupfuura iwe sezvo ndine musikana xD.
Iyo Distro haina mutsauko.
Nei uine yakaoma Distro?
Ndiri programmer saka ndinogona kushandisa chero chandinoda asi ndinonamira neBuntu nekuti ndiyo yandinofarira.
@esty kana uchiramba uchirodha pasi software usingaibhadhare ndinokutumira kuCIA kuti unorohwa naPIRATE, ndinokurudzira kuti uite fomati yeXD
Ini ndiri musikana mudiki ane rukudzo rukuru ndinoda Ubuntu
PS: Kana ndine musikana uye iwe usinga xD
Juan C akadaro
Iyo yakanaka blog. Ndiri kumuziva mazuva ese.
Uye mufananidzo, wakanaka. Kunyangwe ini ndaisada iyo pane yangu pc distro, Mandriva. Sezvo zvinouya kubva kuna Mandrake anova muroyi, Mandriva anofanira kunge ari n'anga, hehe.
Zvakanaka, kanganwa ... ini ndanga ndichida kutaura kuti ndinofarira misoro yakafukidzwa mune ino blog.
PS Tinovimba vachachinja mufananidzo weiyo penguin yeimwe yemakatuni.
Pindura Juan C
Huye, linux chete yeavo vakasarudzwa, sezvo ini nemamirioni evashandisi takasiiwa kunze ... handiti? Pamwe iwe unoona Ubuntu ndiyo yakanyanya kushandiswa, nekuda kwekuti ndicho chinhu chepedyo kukunda chiripo. Ini ndinoramba ndichivhota kuti iwe unofanirwa kudzikisa tambo zvishoma.
@CyverWolf: Kune ruzivo rwako ndine musikana uye zvirinani zvinotora nguva yakareba (kwete sevanhu vanozvifarira) Ndine chokwadi kuti ndiye musikana wako wekutanga uye kunyangwe iwe uri 17, ndosaka uchifara xD
@esty: Juan C ari kutaura nezve uyu mufananidzo wakashata ... http://linuxadictos.com/browsers/linux.png
PS: Gadziridza firefox kuti iwe usatore iyo yekubiridzira kana hutachiona xD
Ahh! Uye maererano nemufananidzo, zvese distros Ivo vanobva kumusikana ...
Debian yakaoma: Kana ini ndingati zvakafanana nekupinda iwe kuyunivhesiti, munhu wese anokuudza kuti mathematics yakaoma zvikuru, kuti kana iwe ukaiwana, iyo kana iwe uchiisanganisa, asi kana iwe ukamira ipapo unoona kuti inongova nyaya yekudzidzira, hongu, hazvizove mumazuva maviri maunodzidza asi pakupedzisira unozodzidza.
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika naDebian, ingori nyaya yekudzidzira zvishoma, asi chimwe chinhu ichokwadi, masvomhu haasi evose, seLinux.
Zuva raunosiya M $, uye hausisina huviri-bot, apo matambudziko ako ese emakomputa agadziriswa achishandisa Linux "zvisinei nekunaka" zvakanaka, musi iwoyo pamwe unogona kuti uri mushandisi weLinux chaiye.
Zvakanaka, ini ndinofunga iwe unofanirwa kuisa OpenSUSE pane runyorwa rwezviri nyore, ichokwadi kuti vamwe vazhinji vakashaikwa, asi murume, SUSE ndomumwe weanozivikanwa ...
Ini ndiri wekutanga kubvuma kuti ndiri musikana mudiki, ndaida kuisa debian ndichinyepedzera kushinga asi chinhu choga chandinosvika parizvino chisvinu nhema, ndichiri musikana anoshandisa Ubuntu.
@Zvese: Thanks nezve makomendi!
@Nitsuga: Ndine iwo mufananidzo kubva kuGoogle, handina zano rekuti ndiani, ini ndakauteedzera zvakashata senge ndiri kutevedzera XP hahaha. Zvese zvandakaita kwaive kuchinjazve ndokuzvimedura nepakati.
@McLarenX: Ndarovha OpenSUSE, zvinofanirwa kunge zviri nyore, asi sezvo ndiri musikana mudiki, kubatana neADSL kwanga kwakandiomera uye ndakabvisa dhisiki rangu.
@ LJMarín: Iwe uri mumwe weavo vanotenda kuti Linux ndeye "yevakasarudzwa"? Saka Linux inotongerwa kugara iri 2%. Handizive kana ndainzwisisa nemazvo.
@fuentes Uchishandisa Internet Explorer Internet Explorer 7.0 paWindows Windows XP !! : KANA
LJMarín anoti iwe uchave uri mutambi weLinux chaiye kana iwe ukangoshandisa Linux chete, gadzirisa matambudziko ako nayo, usvike pakuiziva, uye usisina mbiri-bhutsu.
Asi zvakadaro: UBUNTU ROCKS !!! :D
@ffuentes @ N @ ty @estyPS: Ini ndinoda yako blog! (Ivo vatove mune yangu anofudzaRamba wakadaro! : D
@fuentes: Ini ndakanganwa (usanditorere yanhasi): Icho chifananidzo chinoburitswa pasi peGPL, saka usazvidya moyo.
@Nitsuga, LJMarin: kana ndosaka, ini ndisina Windows pakombuta YANGU uye sekutaura kwa esty, ndakatozvitsanangura mune imwe nguva nguva yadarika. Kana iwe ukatarisa mudenga, tarisa pandiri izvozvi
Ndine Windows nekuti ndiri kure nePC yangu neBuntu (kunyangwe ndichifanira kubvuma kuti ndine mbiri-bhutsu nekuti ndinoda kutamba nekombuta)
@esty: Ona pamusoro Uchishandisa Mozilla Firefox 3.0.2 paWindows XP (kunyangwe ichiwanzo taura Uchishandisa Mozilla Firefox Mozilla Firefox 3.0.2 paLinux) Iyo vhezheni itsva yakabuda mazuva mashoma apfuura.
@fuenes: Une smartphone! Rombo!
Izvi ndinotumira kubva kune zvangu. Ngatione kuti zvinofamba sei?
Ndiri kuenda kunopa ZVANGU ZVINHU ZVEMAonero:
Pfungwa 1: Vakakanganwa kutumidza OpenSUSE. Haisi kumashure kweUbuntu uye nevamwe vazhinji yakanyanya kushandiswa muFree world?
Pfungwa 2: "Ini ndinoshandisa Ubuntu, Windows XP ndeye mapenzi." Handina kuona chero stats, asi vazhinji vevashandisi vanoenda kuUbuntu vanobva kuXP (ndinofungidzira). Ndakazviona kasingaperi pamaforamu eBuntu. Zvakare, ngatiratidzei kuti vangani vashandisi veUbuntu vanoziva zvazviri kuumbiridza kunyorera, kana kuti iri BIN faira iri. Izvo zvakanaka kuti kuzviisa-wega mapakeji anouya (ini dzimwe nguva ndinopedzisira ndoshandisa maRPMs muSUSE), asi kushandisa linux kushandisa ungwaru, pfungwa, njere, uye kuzvidzidzira-kudzidza zvizere. Ndinoda kuona avo vasingakwanise kuwana yavo .DEB uye vanofanirwa kuumbiridza: ivo vachati UBUNTU IS SUCK ...
Pfungwa 3: Pachagara paine kukwikwidza kukuru kwehungwaru mundangariro dzevanhu, kuendeswa kunzvimbo ipi neipi, sezvatiri kuona pano. Kana ini ndikashandisa OpenSUSE, zvinoita here kuti ndive akangwara kana nani pane mumwe anoshandisa Linux Mint? Kana ini ndichigona kuumbiridza chirongwa ndisingashandise imwechete auto-inogadzikana package, zvinoita kuti ndive mushandisi ari nani pane uya zvinoenderana neDEB kana RPM mapakeji kana chero chii?
Kune akawanda akawanda nuances ehurukuro anogona kugadzirwa muLinux, kuti izvi hazvisi kupera. Iyo chete inodzikinurwa uye 100% yechokwadi muhurukuro dzerunyararo dzatingave nadzo ndeyekuti kana isu takakamurwa, Linux haigone kuve padanho reMamwe maSystem Anoshanda ayo, akavakirwa manyepo, apedza homwe dzevanhu. Ngatitaurei kuva vakatendeseka, uye ngatishandise Mahara Software, ngatizviremekedzei isu uye ngative Nharaunda YAKANAKA!
PS: Mukutaura kwangu iwe uchaona kuti ndinosaina neWindows XP. Zvinoitika kuti ini ndinoshanyira iyo blog panguva yebhizinesi maawa. Uye chero ani ari kunetswa, taura naManeja wangu ...
@ bachi.tux: izvo, ini ndinovhotera vasikana vadiki linuxras uye chaizvo-maziso pamwechete. Neichi chikonzero, chirevo senge chaLJMarín hachinyatsopinda mumusoro mangu.
@ ffuentes is as Nitsuga said:
Chisingapinde mumusoro mangu ndechekuti ndaigona sei kufamba ndichitaura ndichikurudzira linux uye iyo SL ine huviri-bhutsu neXP uye kuti pese panokanganisika kana kunetsa, ndaimhanya ndichidzoka neM $.
Uye semusikana mudiki, handisati ndambotaura kana kufunga kuti, sekutaura kwandaive ndamboita ini ndisati ndashandisa PCLOS iri nyore kushandisa, ndinayo mbiri-bhutsu naDebian kana imwe ikakundikana ipapo ini ndine imwe, kubva kuUbuntu ndakadzidza izvo.
Kana iwe uchida kuve nekaviri-bhutsu yemitambo, basa, nezvimwe, zvakanaka neni, uye chii chinonzi Linux chete kune vakasarudzwa? hahaha pamwe ndaifanira kungotaura kuti linux haisi yemunhu wese.
Ini ndinofunga kuti kurwira kugoverwa kuti ndione kuti zviri nani kana ndezvipi zvepamusoro ndinozviona zvine ruremekedzo rwakafanira ndisingade kukanganisa zvishoma kuzvidza kune zvimwe zvinogoverwa rangarira kuti Gnu linux kugoverwa kunotanga kubva kumwechete musimboti
uye vane iwo mumwechete mutemo software, kunyangwe mamwe akaomesesa kana mamwe akareruka, ndosaka vachidaidzwa kunzi hanzvadzi kugoverwa
Rangarira kuti chinoita kuti kugoverwa kana sisitimu inoshanda ishandurwe, ndiani anoigadzirisa, uye ndiani anodzidza kuishandisa nekushandisa zviri nyore zvichienderana nezvinodiwa.
Ndosaka ndichifunga kuti vese vanoita basa rakakosha uye vane maturusi ese anoita mabasa nenzira yakapfava kune maturusi anoita kuti zvinhu zviome zvakanyanya.
Nenzira imwecheteyo, zvisinei nekuti nzira iri nyore kana yakaoma sei, panogara paine timu, kungave mumapeji, akanaka mabloggi akadai kana maforamu anoda kubatsira nekupa zvakanakisa zvavo.
zvese kune izvo zviri zveanoshandisa system uye izvo zviri zve x kugovera
Ndinovimba chirevo changu hachikunetsi, kwaziso uye makorokoto epeji rakanakisa kudaro
[Ini ndinoshandisa kuyedzwa kwaDebian, asi apo ini ndinotumira kubva kubasa (rarama hupenyu hwakareba!) Izvo zvinobuda zvinobuda. Mese muri vacheche xD]
Hausi kunzwisisa LJMarin. Iyo Linux haisi yemunhu wese yakafanana nekutaura kuti Win haisi yemunhu wese, asi hazvina kufanana nekutaura kuti imwe kana imwe OS ndeyemapenzi kana vakasarudzwa. Kana zvisiri zvehutsinye monopoly yeM $, vangani vangashandisa OS seisina kugadzikana uye isina kugadzirirwa kuchengetedzeka seWin? Kana vanhu "vatyairi" neWindows, imhaka yekuti kwemakore mazhinji isu taifanirwa kuidya isu tichida kana kwete.
Zvinosetsa: Ndine mbiri-bhutsu neXP yandakatanga kufunga nezve kutamba, asi pakupedzisira musikana wangu chete anoishandisa. Uye kana zvinhu "zvikashata" ndinofanira kuenda kuDebian kana Knoppix LiveCD kuti ndigadzirise. Uye usafunge kuti ndine yakawanda yeLinux chiitiko.
Kuva nemusikana hazviiti kuti iwe uve murume. Zvakanaka, ini handizive vakadzi vane musikana. Uye mukadzi! XD
Pindura kuna bagu
Ini ndinoshandisa Ubuntu. Ndiudze mwana, ndiudze zvaunoda, asi inoisa mumatanho maviri, inoenderana nezvinhu zvakawanda, uye iri nyore kushandisa.
Hongu, ndinoda kuyedza zvinhu, ndinofarira kudzidza, asi ndinodawo kuva nehurongwa hwekushanda hunoshanda.
Ini handifarire kuve Linus Torvalds, ndinoda kuti iyo sisitimu yekushandisa ikwanise kuishandisa sisitimu inoshanda.
Ndiri kungotanga pane iyi GNU / Linux uye ndinofunga kuti Ubuntu iri nyore kunzwisisa uye kushandisa distro, yakakwana kwazvo uye yakasimba.
(Ndakave nema psadillas neSlackware, Suse, Madrake panguva iyoyo, uye Gentoo wandisina kumbobvira ndaita kuti ishande, kumashure muna 2004 vakandibvisa kure linuz, asi ikozvino ndadzoka kuzogara)
Uye hongu, ndiri kushandisa Windows izvozvi. Chii chauri kuzoita, mukuru wangu kuMicrosoft MVP, anonditarisa zvakaipa pandinotaura nezve linux kubasa = P
Pindura kune Snowflake
Ubuntu haisi nyore nekuti yakafanana neWindows.
Zviri nyore nekuti zviri nyore kuisa (nyore kupfuura Windows kunyangwe).
Uye nekuti inowirirana kwazvo nezvinhu izvo mumahwindo waungatambise maawa uchiisa madhiraivha.
Iyo yakagadzikana, inokurumidza, yakagadzikana, yakachengeteka uye iri nyore kushandisa.
Yakaisvonaka Inoshanda Sisitimu
Handifunge kuti Debian yakaoma. Iyo yekumisikidza haina kuomarara (pane kana vhezheni yeiyo inosimudza iyo yakajeka).
Ndakafanirwa kuisa Fedora, Suse, Ubuntu, Debian…. uye zvaive zvakandiomera zvakanyanya naFedora (semuenzaniso) pane naDebian.
Nekuda kwekubuda kwevatyairi, ichokwadi kuti waya dzimwe nguva "dzinoomarara", asi kubva pane ruzivo ndakaisa nhare yangu mumaminitsi asingasviki mashanu (zviri pachena mushure mekuiisa kanopfuura kagumi).
Zvisinei…. pane nzira yekubuda muaya "matambudziko" (zvichitaurwa kuti neWindows, nzira yekubuda mumatambudziko aya ndeyeKUTAURA: s)
Pindura kune rakaoma
Ini pachangu, ndinoshandisa GEntoo pamaseva angu, Gentoo pane desktop yangu PC, uye mangoti laptop yangu painosvika ... ini ndinoshandisawo Gentoo pane yangu laptop.
Uye ndeye chikonzero chehunyanzvi, Gentoo haimhanye… nhunzi !!!
Geovanni BR akadaro
Iwe unoziva kuti uchazove unozivikanwa nemhinduro yako kana icho chiri icho chinangwa chako, kune rangu divi ini ndichakuudza kuti kana iwe uchinyatsoda kudzidza GNU / Linux padanho rekutonga uye kwete semushandisi wekupedzisira, iwe unofanirwa kusarudza izvo zviri padhuze nechinangwa ichi uye ichi Chinongova chirongwa chakaomarara sekuchidaidza kwaunoita, ini ndinonyanya kukurudzira kuti wega wega system maneja anofanirwa kudzidza kumisikidza uye kuumbiridza kwete chete zvinoshandiswa, kwete chete kernel asiwo yavo Linux, ndiyo chete nzira yekudzidza chaizvo nezveGNU / Linux
Pindura Geovanni BR
Debian ndiyo yakanakisa, yakatsiga uye yakakwana kwazvo maererano nesisitimu!
Kana ivo vakaona kuti ndiri mumahwindo imhaka yekuti ini ndimo kune hanzvadzi yangu (chaicho windowsmaniaca, !!)
LXA! Zvinosungirwa kuti uratidze kururamiswa kwako kana ukataura neWindows.
Kwakanaka kupinda kuti iwe waita shamwari.
Zvakanaka, ini ndinoshandisa Ubuntu, ndinoifarira, inogutsa zvese zvandinoda, ndiri kudzidza Computer Injiniya, ndiri kuronga muProlog, ndatopfuura Advanced Advanced maseketi, mune ino semester tiri kuisa pamwechete processor, uye zvimwe zvakawanda zvinhu izvo zvandinofunga zvakandigonesa kuti ndikwanise kupinda mune chero distro uye ndongorwa kurwa kusvikira ndawana mhinduro, uye kana ndikasarega, ndinochengeta dambudziko kusvika rave chikamu cheXD yangu.
Kune rimwe divi, ini ndinofunga kuti kunzwa kukura kupfuura mumwe munhu nekuda kwekushandisa zvakanyanya "kuoma" Distro kune vana, hapana nguva yatinofanira kunzwa zvakanyanya nekuti tinoshandisa imwe OS, imwe distro; Munhu wega wega akakodzera kushandisa yaanoda uye anogona kusvika pakuziva zvimwe zvinhu zvakawanda kupfuura zvatinoita uye izvo hazvitipe mukana wekunzwa wakakura nekungoshandisa 100% koni distro.
Nyika yaizoipa kana munhu wese akafunga nenzira iyoyo, yenguva dzino isu tingadai tisina nzvimbo dzakajeka sezvo isu tese tainzwa tichikwanisa zvekuti kana maGUI haangadi kuva nawo.
Saka, kana iwe uri geek uyo ane hombe ego yekukwanisa kuronga padanho remagetsi pane rako rakaomarara dhiraivha… ..ihwo husimbe hwaunondipa xD
Ini ndakanganwa ... chero distro inogona kunge yakaoma sekuda kwako, ingo bvisa yako graphical nharaunda, uye shandisa 100% koni, hapana KDE, GNOME kana chero chinhu ... uye zvobva zvanetsa senge chero yakaoma distro, hongu Ndinoziva munhu wese zvirongwa zvaunotora, hauzove nematambudziko.
Ini ndakakanganwa zvakare haha ​​... sezvataurwa pamusoro apa, chero mushandisi ane Linux chete pamushini wavo murume weLinux mushandisi. Saka, sekutumira kwandakaita Windows kuti ibhuye zvachose, ndichisiya laptop yangu ndega kuLinux, ndinofunga kuti disk rekuyedza rakapasa ... haha ​​... kuchikoro shamwari dzangu dzichiri kumuendesa kusiya windows xD
Kana paine chero munhu anofarira, heino chinongedzo chekudhawunirodha chifananidzo chinotungamira iyi posvo, pamwe neiyo Wallpaper kune yega yega distros, kusanganisira Linux, mweya weumwe neumwe wavo: D
Kwandiri mifananidzo yakanakisa ndeye suse, ubuntu uye linux, iwo akanaka kwazvo: P
Pindura kuna JoSH
Kunyangwe munharaunda yeGNU / Linux tinowana madzinza…. Bah
Zvakanaka pachangu ndinofunga kuti hazvisi izvo zvinoshandiswa asi kuti ndiani anozvishandisa, zvisinei nekuti anoshamisira sei distro, haimbomira kuve linux uye kuve chikonzero chekudzidza, mune yangu kesi ini ndaishandisa kubuntu, Ubuntu, Red Hat uye Devian uye Chokwadi vane misiyano yavo asi kana icho chinangwa chawakaenda kubva kuGuindows kuenda kuLinux chaive chekudzidza, unogona kuzviita mune chero avo vasingatombomira kuve nekuoma kwavo ... Salu2 ahhh uye ini ndiri maziso makuru hehehe
Handifunge Sabayon iri nyore distro. Ndakaiisa ndikatadza kuwana graphical installer. Ini ndinofunga mapakeji anongoiswa chete kuburikidza neconsole. Iyo zvakare ine yakataridzika chaizvo kutaridzika, graphically iyo isiri isina kubudirira distro.
Riripi rangu Suse Enterprise (kwete OpenSuse XD Ndivasikana vashoma izvo)! ..
.. Sisi vangu vanoshandisa Ubuntu .. uye haasi musikana mudiki :) .. kunyangwe achidaro ..
.. Haha that part of: I use Slackware, I'm Machazo ..
- Slackware? Donhedza icho chinhu oe! .. Ini ndinoshandisa Gentoo .. xD! ..
Yakakurumbira musoro wenyaya!
Pindura kuna Oakenfold
Ini handizive zvakawanda nezve linux asi pane pentium 1 ini ndaisa imwe yeiyo mini distros, imwe inonzi dsl, ndinofunga inotaura chimwe chinhu nezve knoppix nekuda kweiyo kernel, yakandipa mhedzisiro. muturikiri windows ivo vari pachena uye iwe unogona kuona iyo Wallpaper ine zvinyorwa zvichimhanya pamberi payo, chimwe chinhu ndechekuti zviri nyore kuisa uye ine maviri akasiyana desktops ayo anogona kuchinjwa, imwe iri jw imwe yacho iri fluxbox la Iyo vhezheni Ini ndinoshandisa iri 4.2.2, ndinoziva vakaburitsa vhezheni dzayo, asi sezvo iyoyo inoshanda mushe, ndinofunga ndeyechokwadi keda
Zvinoshamisa bonde iyi positi. Ini ndinokuraira kuti usafambise kungwara kwemunhu nebonde rake. Uye zvakare, iyo chaiyo linuxero inoedza iyo yese distro iyo yaanogona pasina kusarura kune vanhu vari kutanga. Yemahara software yakanyudzwa kunze mune aya marudzi ehurukuro, achichichinja kuita geek nyaya. Ndinokurudzira kuti uongorore mutauro wako nenzvimbo dzako sezvo paine traffic huru iyo inoverenga nekuidzidza.
Munhu asingakwanise kusiyanisa pakati pepabonde uye nzira yakajairika yekuzviratidza akashandiswa muchirevo zvinoita kuti ndifunge kuti havazi vese vanhu vanoverenga LXA! Ivo vakangwara.
Ini ndinoshandisa Debian uye ini ndaishandisa Slackware uye ndakaedza Zenwalk uye kana ndikasaedza Gentoo imhaka yekuti kumba vanondiuraya kana ndikapedza mazuva maviri ndichiisa chimwe chinhu (panongova nekombuta imwe chete).
Sezvandakareva, ndakaenda kuburikidza nekuparadzirwa kwe "varume". Uye ini handisi ngochani kana tomboy xD. Kunyangwe mukuyedza zvakabuda kuti ini ndinofunga "semurume" (hukuru hweseri reruboshwe - rationality - kugona kubvisa - anoona-epakati uye anonzwisisika-masvomhu njere seakanyanya kuvandudzwa): S. Zvakanaka, izvozvo hazvinzwika zvakanyanya, handizvo here? : D
Ini handizive kana iko kushanda kwehuropi kuri nekuda kwekuti ini ndiri wekuruboshwe-ruoko, uye kuruboshwe-vanhu vakachinja hemispheres.
Muchokwadi, muhudiki hwangu ndaitamba nemotokari uye zvipenga zvemahombekombe uye ndakavhura chero chinhu chemagetsi (mawadhi edhijitari, macalculator, nezvimwewo) kuti ndione magadzirirwo acho uye kana ndikawana chinhu chitsva kubva ipapo, yaive: P
zvekutyisa, vakandivanzira zvinhu nekutya kuti ndingavatyora xD
Mhoroi, ndiri sei pipo65 zvakare izvozvi ndiri kushandisa mbwanana chokwadi ndechekuti iyi vhezheni ye linux yakanaka ini ndinoda imbwa ine chipfuwo
Iyo ine akawanda mapurogiramu akaiswa, chinhu chega chaingangoda ndechimwe chinhu chekuvhura iyo .pps uye hapana chimwezve chemushini wemba, zvichave zvakakwana kuti nditarise tsamba msn chat irc edit xml zvinyorwa zvinyorwa cds uye zvakanaka zvandakataura. Kukushaya iwe kumusoro ndeye pps muoni kubva watotenda chaizvo, hello atte
pipo65 Ndanga ndichinyatsotevera Puppy Linux kweinopfuura gore nehafu uye zvinonakidza. Ini ndinofunga zvasara senge pamba distro. Iyo inotove neyekuongorora uye chengetedzo kunyorera kwema network .. (netcat, nmap, tcpdum, nezvimwe ..) Ndinoishandisa sehondo, kununura uye diary distro. Kana iwe uchida kuona * .pps une sarudzo ye:
-install yakavhurwa hofisi
-isa waini uye mukati mhanya iyo pps muoni
-install musiyano we puppylinux iyo yatove neOoo (yakavhurika ofccice.org) yakaiswa.
Nenzira, puppy ndeye yakazvimiririra distro, asi ine zvimwe zvinoenderana ne "Slackware" kubva pahwaro hwayo. slackware ndeye murume distro lol. XD
nzombe yakagara akadaro
never, never but HANDINA kumboona ngochani ichishandisa linux (ndinofunga vanoshandisa mac)
Kudavira bhuru rakagara
Ini ndinoshandisa Ubuntu, uye zvakanaka, zvabuda zvakanaka kwazvo, zvinomhanya kwazvo, uye chinhu chose, kunyangwe ini ndisingazive, Ubuntu iri nyore kushandisa, asi zvakare inogadziriswa.
Ha ha zvakanaka uye zvinonakidza zvirevo mushe ini ndinoshandisa Debian neBluewhite 64 (unofficial Slack ye64) uye vana vangu vanoda Mandriva 2009.
Gentoo anondibata asi ndinofunga kufarira kwangu kungangove kufananidza kumhanya Vs Bluewhite Saka ini zvirinani kuedza LFS (Ichi ndicho chechokwadi cheMurume).
Ichokwadi distros ine nharaunda diki dzimwe nguva inowana kuomarara asi icho chikamu chekudzidza.
Saka mamwe ma distros andinodisisa ndiPaldo ayo ari kukurumidza chaizvo uye nerutsigiro rwemultimedia kunze kwebhokisi uye Wolvix (yakavakirwa pahusimbe) iyo yandiri kutarisira kuburitswa kutsva; Yangu inotevera bvunzo ichave Pardus nekuti inogara ichigamuchira zvakanaka ongororo zvese muDrowrowatch uye mune mamwe mablog.
PS ini ndinotumira kubva kuWindows nekuti ndiri kubasa
Zvakanaka, mukati mevasikana nevarume
iko kufamba kwacho kwakabva kupi
ndinotenda Mr. Richard M. Stallman
uye dudziro yayo yemahara software
Ini ndinoshandisa Trisquel yakatorwa kubva kubuntu
zvisinei ndeimwe yemastros
inotsigirwa neFree Software Foundation
Ivo vakanganwa hunhu hwerusununguko
uye kururamisira uye kubatsira muvakidzani
izvo mumaonero angu ndizvo zvaaida
Rusununguko mu software ndizvo zvinoreva kufamba
kwete ari nani kana chii SO
asi kuva nesarudzo uye kurwa
sezvazviri muhupenyu chaihwo kunze kweSO kuno kuMexico monopoly yeTelmex, nezvimwe.
Inotakura pamwe nepfungwa yekupandukira uye yemahara kufunga
Rangarira hama dzeGNU / Linuxeros
inoita 11 makore
Munyika yeLinux mune zvese. Kune avo, kunyangwe ukabvunza zvakadii "iripi C :?" Ivo vachakupindura nemutsa kuti iro peji reimba rinoshandiswa muLinux uye ivo vachakutsanangurira iwe zvishoma nezve zviri kuitika.
Uye kune vamwe zvakare vanotanga kukutuka nekuti unoshandisa Windows, uye paunoshandukira kuUbuntu, vanokutuka nekuti unoshandisa Ubuntu. Uye kana iwe ukaenda kuDebian ivo vanoseka nekuti kusvikira iwe uchishandisa distro isina gui ivo havana "kukodzera" kushandisa Linux.
Ichokwadi ndechekuti, kunyangwe ndichifarira kudzidza, ndinofarira kuti kana ndikaneta ndinogona kushandisa iyo system pasina matambudziko.
Uye ini zvakare ndine XP muchikamu, chemitambo midiki. Uye usandiudze kuti mitambo yeLinux yakangonaka nekuti inhema dzenhema. Kwete kana kutaura nezve marara eWine
Pindura kuna Arthigus
Zvakanaka, ndinofarira komuredhi vazhinji vevashandisi veUbuntu nekuti vaitama kubva kumawindo, ini ndaive mumwe wavo nekuti ndaida kuyedza inoshanda inokurumidza system iyo yanga isina matambudziko akawanda nema virus uyezve ndakaisa akati wandei vhezheni ubuntu debian anovhura puppylinux fedora, pakupedzisira mamwe asi pss inoita senge yakasununguka kwandiri ubuntu uye inovhura kuti ini ndakaiisa pamashini angu maviri uyezve ndinayo yepeni.
Zviripachena kuti iwo musoro unonakidza, asi ini ndine mubvunzo. Ini ndiri mukadzi, ndakagara kwenguva refu kubva ndichirega kuita musikana mudiki uye handifarire kuve murume. Ini ndinoshandisa Ubuntu, pamwe ndinofanira kuchinja? Iwe unoshandisa murume distro? Ndeipi distro iyo murume anofanirwa kushandisa uyo asingade kuti aratidzike kunge akasimba uye ane chivimbo nguva dzese, ndiani anoda kugona kuratidza kutya kwake uye zvaasingakwanise? Haasi murume, handizvo?
Ini ndinofanirwa kujekesa nekuda kwekukwanisa kuti debian ave, pamwe havana kuyedza Debian 7. kana zvirinani zvirinani OpenSuse 13, ayo ave ekupedzisira-mushandisi masisitimu.
Pindura kuna pedro
Une dambudziko rakakomba kurwira mapenzi egos evamwe. Zvigumise pakuratidzira distros uye kutaura kuti ndeapi akaomarara kana akareruka.
Izvo zvinomutswa mune ino positi zvinoita kunge zvakapusa kwazvo kwandiri. Ini ndinochengeta iyo inobatsira ruzivo, zvisingaite chinhu. Kana ivo vachiedza kuisa egos yavo mune inonakidza nyika seLinux, zvinoita kwandiri kuti ivo vese vava vasingazive mapenzi umo chirevo chikuru chakarasika: "Nharaunda".
Ichokwadi chiri nyore: kana munhu achinja kuita kwakafanana kudya kunotungamira kune akaomarara madistros. Mune ruzivo rwangu ndakatanga neLinux Mint, ini handina kumbobvira ndaisa Ubuntu nekuti handizvifarire uye handichazvifarira, ndobva ndaisa Elementary OS, uye ikozvino ndinoenderera mberi nekutsvaga nevamwe, nekuti hazvina kundikwanira. Ndiri kuda chimwe chinhu chakanakisa chinogadziriswa, asi ini handisi kuvhiringidza neArch parizvino, uye izvo hazvireve kuti ndiri kumukira.
Imwe neimwe inoita zvavanoda uye chinhu chakanakisa kuyedza, kuunganidza, kubvarura, nezvimwe. Zvanga zviri! zviri nyore kudaro! Ngatione kana mazano avo akakwana uye izvo zvisina maturo zvinobuda mumisoro yavo.
Ini ndakakwanisa kuisa Gentoo pane Win7 chaiyo muchina ine IceWM desktop, chinyorwa mode browser (Lynx), PDF muoni, mufananidzo muoni, faira browser, mumhanzi, Mp3, nezvimwe. uye zvakanditora mazuva mazhinji; ndaneta, asi ini ndakazviita nekutenda kune zvepamhepo zvidzidzo (zvachose kuvonga). Uye ndosaka ndichifunga kuti ndiri super macho ^ ^ Ini ndinongoda kutamba neLinux
Kana zvasvika kune distros yakafanana neWindows, ini ndinofunga kuti Zorin OS uye mudiki Chalet OS ndivo vakafanana. Yekutanga inogadziriswa dhizaini yemawindo 7 uye zvakare inouya newaini yakasanganiswa uye yakanyatsogadziriswa. Yechipiri ine chinhu chese windows, kunyangwe iwe uchikwanisa kuchinja dhizaini uye nehurongwa hwehutongi hwakafanana.
Chinhu nezveUbuntu ndechekuti inozivikanwa muLinux munda, tisingataure zvakanyanya.
LiveCD - yakanaka sarudzo
Uye chii chinonzi Compiz Fusion?